म परदेशमा, श्रीमती अर्कैको अँगालोमा ! – Khabar PatrikaNp
July 31, 2020 68
आमालाई कुनै रोग थिएन। नेपाल आएपछि थाहा पाएँ कि आमाले त आ’त्माह’त्या पो गर्नु भा’को रै’छ १ अब आफैँ सोच्नुस्, ममाथि कस्तो वज्रपात भयो होला १ पछि नेपालमा आमाको काम सकेर केही दिन गाउँ घुम्दा त यस्तो कुरा थाहा पाएँ कि मलाई अझै पनि पत्याउन गाह्रोे भैरहेको छ। गाउँलेले सुनाए, ‘तेरी स्वा’स्नी त अरु कसैसँग लागेको कुरा थाहा पाएर आमा तनावमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले आ’त्माह’त्या गर्नु भयो।’
म फेरि एक पटक ढल्न पुगेँ। यो कन्फेसन पनि कसरी लेखिरहेको छु, मलाई थाहा छैन। कति संघर्ष गरेर, कति रात अनिँदो बसेर १२ घण्टा ड्युटी गरेर सानो खुसीको झुपडी बनाएको थिएँ तर सब चकनाचुर भयो।
मेरो अनुपस्थितिमा ऊसँग रात बिताउने मान्छे त उसको मभन्दा अघिको प्रेमी रै’छ। उसलाई मैले अब स’म्बन्ध विच्छेद गरौँ भन्दा ‘रुँदै मलाई माफ गर्दिनु म सुध्रन्छु’ भन्दैछे। अब म पराइसँग रात बिताएकी श्रीमतीलाई कसरी विश्वास गरुँ रु म भित्रभित्रै खोक्रो हुँदैछु। न फर्किएर विदेश जान मन छ, न बाँच्नै। चाहिएको सबै पुयाइदिएकै थिएँ तर आज आफ्नै प्रेमले यस्तो गर्ली भनेर सोचेको पनि थिइनँ।
अब स’म्बन्ध विच्छेद गरौँ भने बाबा सुगर र प्रेसरको बिरामी हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि केही भइदेला भन्ने डर। म कसको मुख हेरेर बाँच्नु रु हजुरहरुसँग केही सल्लाह छ भने दिनु होला। म के गरौँ रु नागरिक शुक्रबार बाट।
Prevसुन भएको झोला फ्याँक्नेको गाडी लुकाउन युवतीको सहयोग !
Nextकोरोना उपचारमा खटिन नमानेका २५ जना स्वास्थ्यकर्मी पक्राउ !
कक्षा ८ मा पढ्ने छोरी दुब्लाउँदै गएपछि आमाले पुर्याईन् अस्पताल, रिपोर्ट आउँदा आमा बेहोस
गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित उहाँका सुरक्षा र राजनीतिक सल्लाहकारको कोभिड–१९ परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (33511)
नन्दा सिंह को आखा बाट अन्धकार हट्यो पहिलो चोटि संसार देख्दा खुसिले रोईन (भिडियो हेर्नुहोस) (20048)